Doogee Shoot 2, aragtidii ugu horeysay ee MWC 2017 | Androidsis
Alfonso ee Miraha | | MWC, Noticias
Doogee sharad ku saabsan bixinta qalab kala duwan qiimaha garaacid. Tusaale waxaa ah Doogee Y6 Max 3D, taleefoon aad u xiiso badan oo aan ku tijaabinay MWC. Hadda waa markiisii Doogee toogasho 2, talefoonka laba kamaradaha ugu jaban ee suuqa. Oo waa taas Waxay ku kacaysaa kaliya 70 euro.
Waynu waynay fursada aanu ku tijaabin karno Doogee Shoot 2 ee goobta MWC 2017 markaa waxaanu u dhawaanay qolka soo saaraha si aanu u aragno sida uu u dhaqmo talefankan. Iyadoo la tixgelinayo qiimaheeda, ma xuma haba yaraatee.
Kani waa Doogee Shoot 2
Waxa aanu fooda inagu soo haysa talefan jidh bac ka samaysan yahay. Xasuusnoow in uu yahay talefan casri ah oo raqiis ah, sidaa awgeed wax badan kama weydiin karno arrintan. Si kastaba ha ahaatee sidaas dheh dhismuhu waa sax oo Doogee Shoot 2 wuxuu si fiican ugu fadhiyaa gacanta.
Waxaa jira tafaasiil aad iiga yaabiyay. Waana arrintii Doogee Shoot 2 waxay leedahay deked dallacadu oo ku taal xagga sare, ku xiga 3.5mm wax soo saarka maqalka. Xaalad cajiib ah oo lagu dhejiyo dekedda USB-ga micro, laakiin waxaan u maleynayaa in kooxda naqshadeynta ay halkaas u dhigi doonaan sabab qaar ka mid ah.
Waa talefan si cadaalad ah u anfacaya; cidiyaha saaran qiyaastii 142.6 x 72.6 x 9.5 mm oo miisaankeedu yahay 174 garaam, Doogee Shoot 2 waxaa loo isticmaali karaa si raaxo leh hal gacan. Qayb ahaan macquul ah iyadoo la tixgelinayo shaashaddeeda 5-inch oo leh xallin HD ah.
Ma codsan karno qalab aad u xoog badan, laakiin waa afar geesle processor taas oo ku guuleysaneysa xawaare saacad ah illaa 1.5 GHz oo ay weheliso 1 GB RAM xasuusta waxay kuu ogolaaneysaa inaad ciyaarto ciyaaro aan u baahnayn culeys garaafeed oo weyn.
Ku bilaw, waxay leedahay a faraha akhristaha xagga hore, faahfaahin ku saabsan qiimihiisa. Markaa isagaa leh batari ee 3.360 Mah, kaas oo ballan qaadaya madax-bannaani weyn haddii aan xisaabno culeyska qalabka taleefankan. Waxaan qiyaasayaa in Doogee Shoot 2 uu socon doono maalin iyo badh dhib la'aan, in kasta oo ay tahay in si dheeraad ah loo falanqeeyo marka cutubka tijaabada ahi yimaado si loo xaqiijiyo xaqiiqadan.
Awoodda kale ee weyn waxay la socotaa kamaradiisa. Ama halkii kiisii nidaamka labada qol. Oo waa in taleefoonku leeyahay laba dareemayaal 5 megapixel Taas oo, ay ugu mahad naqeyso tignoolajiyada uu sameeyay DOOGEE oo ay weheliso Huawei, waxay ogolaatay in sawiro lagu qaado saamaynta bokeh, oo leh tayo ka badan oo macquul ah.
Waxa aan awooday in aan kaamirada ku tijaabiyo tarabuunka, waxaana la yaabay natiijada. Ma ahayn wax fiican, laakiin 70 euro kamaraddani aad bay u fiican tahay. Marka la soo koobo, waxay u muuqatay talefan ku habboon qofka raba inuu ka bilaabo caalamka Android isagoo aan kharash badan ku bixin. IYO Xaqiiqda ah in aad awood u leedahay in aad sawirro ku qaadato saamaynta bokeh, ama ka baxsan, waa wax lagu daro in lagu xisaabtamo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MWC » Doogee Shoot 2, dareenka ugu horreeya
Waxaan la socday habka iibka bilowgii, waligeedna ma shaqeyn ... ma iibsan kartid terminaalka qiimaha la tilmaamay ... 10:00 waa 11:00 subaxnimo gudaha Spain ... iyo haddii aad ka gasho shabakadda internetka waqtigaas ... Ama waa la xannibay ama xiriirku ma soo baxayo ... haddii xiriirku soo baxo, waxay na geyneysaa dukaamada iibka ... midkoodna ma haysto qalabka qiimaha ay bixiso dalabka rasmiga ah . .
Kordhinta taleefannada casriga ah ee leh shaashadaha AMOLED ayaa sii wadaya waxyeellada LCDs